Tag: Global Marketing | Martech Zone
Ithegi: Intengiso yeHlabathi
Amagama angamafu: UkuThengiswa kwehlabathi jikelele ukuvelisa iMfuno kunye noKhula kweDrive
NgoLwesihlanu, Meyi 20, 2016 NgoLwesine, Aprili 1, 2021 Douglas Karr
Ukuze iinkampani zivelise iimfuno kwaye zikhule kwihlabathi liphela, kufuneka zithethe iilwimi ezili-12 ukunxibelelana ne-80% yabaphulaphuli ekujoliswe kubo. Kuba ngaphezulu kwe-50% yengeniso yeenkampani zase-US zivela kubathengi behlabathi, umxholo weebhiliyoni ezingama-39 + #localization kunye nomzi mveliso #translation uyinxalenye yokuqhuba ukuzibandakanya kwabathengi kwiimarike zehlabathi. Nangona kunjalo, iinkampani ezifuna ukuguqulela ngokukhawuleza izinto zazo zokuthengisa kunye nokwandisa ilizwe jikelele zijamelene nomceli mngeni omkhulu: zazo
Ungavumeli uCigna abaleke ngokubulala
NgoMgqibelo, Disemba 22, 2007 NgoMgqibelo, Disemba 22, 2007 Douglas Karr
Phumla ngoxolo, Natalia. Ukuba awuzange uvalwe izibonelelo, ujije kwindawo yokuhlala i-inshurensi, okanye uve umntu onayo- ungumntu onethamsanqa! Umzi mveliso weinshurensi yenye yezona zinengeniso eMelika. Izibalo zilula, kokukhona beyeka abantu ukuba bafe-ngcono inzuzo. Ngaba singakutshintsha oku nge-Intanethi nakwibhlogosphere? Ngaba singangokoqobo siqubise iinjini zokukhangela ezinemiyalezo yeCigna